Soft Coated Wheaten Terrier: Ntuziaka nke 'nkịta onye ogbenye' - Reeddịrị
Bred maka ịrụ ọrụ dị iche iche, nkịta a na-acha uhie uhie ga-abụkwa ezigbo enyi gị.
Na Soft ntekwasa Wheaten Terrier si Ireland , ebe otutu mara ya dika An Brocaire Buí or the Irish Soft-ntekwasa Wheaten Terrier.
Nke a Wheatie bụ ịhụnanya na ụmụaka na na-eguzosi ike n'ihe nye ndị nwe ya. Nweghị ike ịgahie na itinye nkịta a enyi na enyi na ezinụlọ gị. Ka anyị chọpụta ntakịrị ihe banyere Terrier a.
Ebee ka Soft Coat Wheaten Terrier si malite?
Kedu ka Soft Coaten Wheaten Terrier dị?
Ndi Soft Coated Wheaten Terriers bụ ezigbo nkịta ezinụlọ?
Otu esi elekọta gị Soft Coated Wheaten Terrier
Kedu ndụ ndụ nke Soft Coaten Terrier Terrier?
Ego ole ka Soft Coaten Wheaten Terrier nwa nkita na-eri?
Ọchịchọ ịmata Soft Soft ntekwasa Wheaten Terrier mixes?
Ekwesịrị m ịnweta Soft Wheaten Terrier?
Na-aguta: umu udiri yiri nke Soft Coated Wheaten Terrier
Terror a malitere na Ireland , bred iji mezuo ugbo nkịta ọrụ. Wheaten bụkwa ezigbo nkịta maka ịkpa oke, ịzụ anụ ụlọ, ichebe ụlọ ọkụkọ, na igbu ụmụ ahụhụ.
Nkịta a na mmalite akụkọ ihe mere eme bụ nke amachaghị, mana ekwenyere na ha sitere na Kerry Blue Terrier nkịta. Ihe ndekọ mbụ nke Wheaten Terrier malitere na 1785 na County Kerry, Ireland.
Ha natara aha ha site na ha uwe na-acha ọcha mara mma . The ọkụ na agba dị nnọọ iche na bụ otu agba dị ka ọka wit , na-enye ya aha Soft Coated Wheaten Terrier.
Na Klọb nke Irish Kennel nyere ikike ọkwa gọọmentị na Wheaten na N'afọ 1937 na Ireland.
Lydia Vogel wetara mbụ Wheatens ka United States na 1940s, ma American Kennel Club (AKC) naanị ghọtara ụdị N'afọ 1973.
The Wheaten Terrier na-anọgide naanị moderately ewu ewu n'ụwa nile.
Fọdụ na-akpọ Wheaten Terrier ndị 'Wolfhound nke ogbenye.' Iwu machibidoro ndị nkịtị ịnwe nkịta na anụ nchụ nta a ma ama dịka Irish Wolfhound, Beagles, ma ọ bụ spaniels.
Ndị nkịtị Irish Ya mere, zụọ terrier a ịbụ ihe-nzube nile ugbo nkịta , nakwa dị ka onye nche na nkịta ezinụlọ.
Krista bụ Wheaten Terrier, ama ama maka ikike imikpu mmiri . Ọ bịara n'ime otu anụ ọhịa nke ịme 10 kachasị elu na asọmpi mpi nkịta mba nke 2016.
Nke a dị egwu, na-eche na ọ bụ asọmpi megide ndị na-ewepụta ihe , wuru ka igwu mmiri wee dome.
Lelee vidio a na-enye nkọwa banyere eziokwu niile ịchọrọ ịma gbasara Wheaten Terrier:
Ihe omuma nke canine a bu kọmpat square ahu na akụkụ anọ ihu. Isi ha dị ogologo ma ọ dabara na ahụ ha.
Isi ya kwụrụ ọtọ site na olu siri ike ma nwee agba aja aja na imi ojii. Ha nwere obere ntị buru ibu na-adị n’etiti ma na-akpụkwa ya.
Wheatens bụ nkịta siri ike na Ulo akwara na mkpuchi silky dị nro. Isi ụlọ ha na azụ ha siri ike ma dị ike na-eme ka ahụ dị ike na ume mgbe ha na-arụ ọrụ ugbo.
A na-ejikarị ọdụ ahụ ka ọ bụrụ nke na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ọdụ mbụ ya na-adị, a na-ahapụkwa ọdụ ndị na-adịghị edozi n'ime ụdịdị ahụ.
Kedu otu nnukwu nke Wheaten Terriers dị nro
Nke a bụ ọkara-sized nkịta, ya na nwoke guzoro 18 - 19 sentimita asatọ (45 - 48 cm) n'ogologo ma jiri kilogram 35 - 40 (kilogram 15 - 18).
Mụ nwanyị dị obere dị obere na 17 - 18 sentimita (43 - 45 cm) ogologo, na-atụle n'agbata kilogram 30 - 35 (kilogram 13 - 15).
Wheaten Terriers na-etolitekarị ihe dị ka ọnwa 30 mana ọ bụ nke tozuru etozu gburugburu ọnwa 6 - 8.
Ha dị ole na ole ọdịiche n'etiti Irish Soft ntekwasa Wheaten Terriers na American Soft ntekwasa Wheaten Terriers, nwere naanị ntakịrị mgbanwe na mkpuchi ha.
Uwe mkpuchi Irish adịghị eju eju ma dinaa ahụ. Ntutu isi bu silky na wavy , ọ na-ewe afọ ole na ole iji dejupụta, na puppy nwere ike ile obere scruffy. Ha nwekwara ike ịmụrụ ọkụ karịa uwe mkpuchi ndị America.
Uwe mkpuchi ndị America na-adịkarị karịa ajị anụ na-acha ọcha na nwa nkita nwere ike igosi uwe ogologo site na nwata.
Ajị anụ ahụ nwere ike ịdị mfe karịa nke ụdị ndị Irish ma ọ na-adịkarị mma ma na-aga onye na-edozi nwanyị ahụ iji mee ka canine a nọrọ n'ọnọdụ ngosi.
Pmụaka a hụrụ n'anya ịnọnyere ndị nwe ha ma mee akwa nkịta ụlọ mgbe a na-emega ahụ oge niile.
Onye Wheaten Terrier hụrụ n'anya lapping elu oge niile o nwere ike inweta ndị nwe ya , na-emegharị nke ọma maka ndụ obodo na obere oghere.
Uwe silk nke Wheaten Terrier
Nke a Terrier’s otu uwe bụ silky ma jiri nwayọọ na-agbagharị, ọ bụ ihe a na-ahụ anya na-enwe obere nsogbu. Uwe mkpuchi a bụ ihe mere nkịta a ji dị iche na nke ọzọ ụdịdị terrier .
Ọ dara n'ụzọ zuru oke banyere ahụ dum na ebili mmiri ma dakwasịkwa anya.
Agba nke kootu na-abata mgbanwe dị iche iche nke agba ‘wheaten’. Site na paịlị na-acha odo odo na-acha odo odo na ndò ọla edo dị mma, a na-anabata hues niile.
Nwere ike ịhụkwa oge ụfọdụ na-acha ọbara ọbara, ọcha, ma ọ bụ oji na Wheaten gị, nke dị mma.
A naghị ahụkarị ụmụ paati mgbe a mụrụ ha site na iji agba dị mma wee nwee ike ịdị iche na-acha ọbara ọbara, isi awọ, na ojii.
Ha ga- puo agba ndia na akara, na uwe ha ga-agbanwe agba ka ọ bụrụ ndo ya pụrụ iche nke ọka wheat ka pup ahụ na-eto. Nke a ga - akwụsị ozugbo nwata ahụ etoola.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a enyi na enyi nkịta na-achọ ihe ọ bụla karịrị ịbụ n'akụkụ gị na dịkwa ukwuu na ụmụaka, mgbe ahụ, lee anya ọzọ karịa Soft ntekwasa Wheaten Terrier .
Hụnanya na ịhụnanya , Wheaten Terriers bụ akwa nkịta ezinụlọ . Ha nwere ike bụrụ ndị na - emegharị ahụ na ndị na - eme obi ụtọ, ya mere, ọ kachasị mma ịnwe ka okenye nwere mgbe ọ bụla canine a na - enwe obi ụtọ gbara gburugburu obere ụmụaka.
Dị ka nkịta ọ bụla, enweghị omume enyi ha na-enweghị isi nwere ike bụrụ ihe siri ike maka ụmụaka.
Ha nwere ike dị elu ma debe gị n’ụkwụ gị n’ụzọ kacha mma. Ha bu ezigbo ndi enyi kwesiri ntukwasi obi ma chebe ha, ma ha adighi eme ihe ike kari ndi ezinulo ha.
Ha nwere nwa nkita ma wuli elu ma nwee ọ excitedụ ịhụ gị oge ọ bụla ị na-aga n'ọnụ ụzọ. Ga - enweta ihe a maara dịka ‘ wheaten greetin ’ , nke bụ àgwà na-adọrọ adọrọ.
Wheaten Terriers bụ dị nwayọọ karịa ọtụtụ ndị ụjọ, na ọ bụ ezie na ha bụ nọ n'ọrụ na njikere ha anaghị eme ihe ike.
Ha bụ nkịta enyi na enyi, na-eme nke ọma iji nweta anụ ụlọ na nwamba ndị ọzọ n'otu ụlọ, ma dị na-anabata ndị ọhụrụ.
Ha nwere ike ịbụ ndị isi ike na ndị isi ike, mana na-enweghị oke karịa ndị ọzọ na-atụ ụjọ, na ọnọdụ izugbe ha bụ enyi na enyi.
Nkịta ndị a achọghị ịnọ naanị gị ma kwesiri ibi n'ulo ebe mmadu na ha bi n'ehihie. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere, ha nwere ike ịnọ naanị ha ruo ihe dị ka awa 4 - 8 kwa ụbọchị n'otu oge.
Nke a ga- -eme ka nkewa nchegbu, nke na - ebute ịsụ ude na izu ike ruo mgbe ị ga - anọ n'ụlọ.
Ha kwesịrị ịnọ na mbara èzí na ogige dịka ha na-achọkarị ịchụ ihe, n'ihi eziokwu ahụ bụ na ha nwere anụ oriri siri ike ịchụ na ibibi ụmụ ahụhụ. Ha anaghị agba ụja nke ukwuu - ọ na-abụkarị naanị otu ugboro ma ọ bụ abụọ iji mee ka ị mata nsogbu.
Soft Coated Wheaten Terriers bụ nwere ọgụgụ isi, na-anụ ọkụ n'obi ime nkịta obi ụtọ na a akwa trainability larịị.
Ha nwere ike ịbụ ndị isi ike na ndị isi ike, mana obere karịa ndị ọzọ na-atụ ụjọ, na mmụọ ha n'ozuzu na-anabata ọzụzụ.
Zụọ ha site na nwata nkwenye na ndidi. Jiri usoro nkuzi nkwado dị mma mgbe ị na-azụ ụmụ akwụkwọ a.
Mmekọrịta oge mbụ soro ndị ọzọ na nkịta dị mkpa n'ịzụlite Soft Coated Wheaten Terrier na-akpa àgwà ọma. Ha na-asọmpi nke ọma n'egwuregwu nkịta mgbe a zụrụ ha site na nwata.
Soft Coated Wheaten Terriers bụ ezigbo ndị mmekọ na-agba ọsọ na nso nso na-agba ọsọ ma na-enwe mmasị igwu mmiri, nke nwere ike ịbụ ụdị mmega ahụ kwesịrị ekwesị.
Nanị ihe mmezi dị elu banyere pup a bụ na ị ga-achọ na-edozi ya ọ dịkarịa ala ugboro atọ n'izu . E wezụga nke ahụ, nwa na-ahụ n'anya na-atọ ụtọ bụ ezigbo mgbakwunye na ezinụlọ ọ bụla.
The Wheaten Terrier nwere ike imeghari ka ọkụ ihu igwe, ma ha ihu igwe dị jụụ, na uwe elu ha dị nro na-echedo ha pụọ ​​na oyi na mmiri ihu igwe.
Kedu otu mmega ahụ Soft Soft Wheaten Terrier dị mkpa?
Ndị a nwere nsogbu ike dị elu na chọrọ mmega ahụ kwa ụbọchị ijide ha. Ha chọrọ mgbatị ahụ dịkarịa ala minit 30 kwa ụbọchị.
Kewaa nke a na nkeji abụọ nke nkeji ụbọchị, ọ bụrụ na ị chọọ. Mmega ahụ nwere ike ịbụ ije ije dị mkpirikpi ma ọ bụ igwu egwu n’èzí.
Ọ bụrụ na nkịta gị na gị bi n'ime ụlọ na-enweghị ike ịmega na mbara ezi, mgbe ahụ ọ dị mkpa iji hụ na ha na-emega ahụ kwa ụbọchị n'ụzọ ọzọ.
Ndi Soft Coated Wheaten Terriers wụsara?
Nke a Terrier bụ nkịta hypoallergenic dị ka uwe elu ha anaghị awụfu. Ha bụ mgbakwunye zuru oke na ezinụlọ nwere allergies.
Soft Coated Wheaten na-ewekarị ihe na uwe ya, dị ka unyi na irighiri ihe site na mpụga. Iji mee ka uwe ahụ dị ọcha ma dị mma nke ọma, hichaa ya kwa ụbọchị nke abụọ.
Ọ bụrụ n'ị na-achọ uwe mwụda dị ọcha, wee dozie ya kwa ụbọchị. Combs nkịta gị abụghị ọrụ siri ike ma ọ chọghị ọkachamara ọkachamara.
Kwesịrị naanị saa batrị Wheat gị mgbe ọ dị mkpa - dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ha egwuri egwu n’èzí ma merụọ ezigbo ahụ, na-ebu irighiri ihe na ihe ndị ọzọ na kootu ha.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ idobe mkpuchi gị nke Wheaten Terriers dị mkpụmkpụ, ị nwere ike ịkpụcha uwe na-adịghị mma. Nke a ga-ebelata ejiji mmezi na ohere ha trudging unyi n'ụlọ gị si n'èzí.
Bido idozi nwa nkita gị ugboro ole na ole n’izu ka ha wee nwee ike iji usoro edozi ahụ. Nkịta nwere ike inwe enweghị ndidi ma zuru ike mgbe a na-edozi ya, tụmadị ihe ndị dị ka ịkpụcha mbọ ha.
Ọ bụrụ na ejiri usoro a site na nwata, ha agaghị enye gị nsogbu ka ha na-etolite.
Soft ntekwasa Wheaten Terrier oriri oriri
Wheaten Terriers nwere ike inwe mwute afo iji na-eri nri ha elu-edu nkịta nri jupụta na protein na nri. Gbalịa chọọ nri na-enweghị mkpụrụ ma nwee ihe mgbakwunye ole na ole.
Na-enye Terrier Wheat gị nri n’etiti otu iko na otu ọkara nri n’ụbọchị , na-adabere nha na ibu, na nnọkọ nri abụọ.
Nye nkịta nkịta ekike ọka Wheaten Terrier gị dị nro dị n’etiti otu na ọkara na iko abụọ nke nwa nkita dị elu, ma kee nke a n’ime nri atọ kwa ụbọchị.
Kpọtụrụ vet ma ọ bụrụ na ị maghị maka atụmatụ nri kachasị mma maka ogo na ịdị nro gị.
Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị ka Terrier a buru oke ibu, ya mere dozie nri oriri na mgbatị ahụ.
Zere inye nri iberibe tebụl Wheaten Terrier gị na ụfọdụ nri mmadụ . Zere nri ndị nwere nnukwu shuga, gụnyere chocolate na sweets.
A Soft ntekwasa Wheaten Terrier’s afọ ndụ dị ihe dị ka afọ 12 na 14, na n'oge a, dị ka nkịta ọ bụla, ọ nwere ike ịnweta ụfọdụ nsogbu ahụike .
Ndị na-eburu Wheaten ụjọ bụ nkịta ndị siri ike, mana enwere ole na ole ị ga-eleba anya.
Wheaten Terriers nwere ike na-arịa ọrịa ndị dị ka protein na-efu nephropathy (PLN) na protein na-efu enteropathy (Mechie).
PLN bụ ọrịa akụrụ ma na-apụta mgbe protein na-abanye n'ime mamịrị nkịta. PLE na-ezo aka na oke ọnwụ nke protein sitere n'ọbara nkịta n'ime eriri afọ.
N'okwu ndị dị oke njọ, ọrịa abụọ a nwere ike ịnwụ. Ọ bụrụ na Wheaten Terrier na-agbọ agbọ, ọ chọghị iri nri, ike gwụrụ ya ngwa ngwa na mgbe ọ na - ata ahụhụ site na afọ ọsịsa, mee ka ha gakwuru ndị dọkịta ozugbo.
Ahụ ike ndị ọzọ ị kwesịrị ịma bụ gbasara akụrụ dị ka gbasara akụrụ dysplasia, ọrịa na-emetụta akụrụ.
Ọrịa Addison , atrophy retinal na-aga n'ihu, na dysplasia canine hip na-ahụkwa n'ime canines ndị a mana ha anaghị adịkarị dị ka ọrịa akụrụ ahụ a kpọtụrụ aha n'elu.
Iji jide n'aka na Wheaten gị nọ na ahụ ike, dịka ọ bụla ọ bụla nkịta, ịkwesịrị lelee ntị ha maka ọrịa na ahịhịa ezé ha mgbe niile.
Na-eji ịsa ezé dị elu dị elu nke e mere maka nkịta mgbe niile (ma ghara iji ya mee ihe mmadụ).
I kwesiri iburu Terrier gi maka nlele oge niile na vet. Gụnyere nyocha dị ka nyocha hip, nyocha ophthalmologist, ngalaba kemịkal ọbara, na nyocha mamịrị.
Nnyocha ọbara na mmamịrị kwa afọ kwesịkwara ịghọ nyocha oge niile maka ịrụ ọrụ akụrụ na ọdịiche ndị ga-egosi akara ọ bụla nke ọrịa akụrụ akpọrọ aha.
Nwere ike ịtụ anya ịkwụ ụgwọ ebe ọ bụla $ 900 - $ 1500 maka Soft Coated Wheaten Terrier nwa nkita . Otu nne Wheaten Terrier ga-amu nwatakiri nke gbara gburugburu 5 - 8 puppy.
Ọ dị mkpa ịga na a ezigbo onye ọrụ mgbe ị na-atụle ịzụrụ nwa nkịta Wheaten Terrier.
Dị ka nkịta ọ bụla ọzọ, ọ dịkwa mkpa ka ị tụlee ụgwọ dị ka ụgwọ ego anụmanụ, nri, ihe oriri na mmefu ego nke ga-agbakwunye ụgwọ nke inwe Soft Coated Wheaten Terrier.
Lee ụfọdụ ezigbo akụrụngwa iji lelee mgbe ị na-achọ nwa nkita:
Nwa nkita na-achọta
Soft ntekwasa Wheaten Terrier breeders
Mgbe ị gafere otu onye na-azụ aha ọma, ị ga-enwe udo nke obi ịmara na ha lebara anya niile hụ na akwụkwọ ahụike na ahụike dị mma.
Also ga-enwe ike ịrịọ ndekọ ahụike nke ndị nne na nna nwa nkịta dị ka nkwa.
Ndị a bụ ụfọdụ ndị na-azụ anụ ụlọ nwere anya maka puppy Soft Coaten Terrier puppy:
Pụrụ Iche Ndị Nsuso
K&K Hillside Wheatens na Schnauzers
Na Soft ntekwasa Wheaten Terrier Club nke America bụkwa ezigbo nzukọ maka Wheaten Terriers.
Na ọtụtụ nghọta na ihe ọmụma, ha bụ oké ebe na- chọọ ozi na akụrụngwa na Soft Coat Wheaten Terriers.
Soft Coated Wheaten Terriers maka nkuchi
Ma ị na-achọ nwa nkita ma ọ bụ nkịta toro eto, N'ịmụta nkịta nnapụta bụkarị ezigbo echiche.
Ọtụtụ nkịta na-achọ ụlọ na-ahụ n'anya, na Soft Coated Wheaten Terrier bụ enyi na-eguzosi ike n'ihe na nke ịhụnanya na-eweta n'ụlọ ọ bụla.
Lee ụfọdụ nnukwu ụlọ nnapụta iji lelee:
Soft ntekwasa Wheaten Terrier Nnapụta
Mụ anụ ụlọ
Nwekwara ike ịnweta ngwakọta Soft Coated Wheaten Terrier mix, nke bụ nhọrọ na-atọ ụtọ ịtụle. N'okpuru bụ ụfọdụ n'ime nhọrọ ị nwere.
Na Wheagle bu ihe agwakọta n’etiti Beagle na Soft Coated Wheaten Terrier. Bredị a ketara oke ịhụnanya nke Beagle na Wheaten Terrier.
Nwa a na-egwuri egwu bụ enyi na-ahụ n'anya, ọ ga-esiri gị ike ịsị mba ukwu nkịta nkịta na-acha aja aja.
Ha nwere ike ịdị iche na agba ọcha, beige, tan, ojii, na aja aja na-adabere n'ụdị mkpụrụ ndụ ihe kacha bụrụ.
Nkịta wheagle hụrụ akwa ọhụrụ ya n'anya - Isi ihe onyonyo
Na Whoodle bụ ngwakọta nke Poodle na Soft Coated Wheaten Terrier, na-eme nkịta enyi na enyi. Ha hụrụ ụmụaka n'anya nke ukwuu ma bụrụ nkịta ezinụlọ.
Ha nwere uwe mkpuchi mara mma nke nwere ike ịbụ oji, aja aja, ọbara ọbara, ma ọ bụ ude ma chọọ nhazi kwa ụbọchị.
Kpoo nkịta nkịta Whoodle na-anọdụ na nnukwu ogwe osisi - Isi ihe onyonyo
Na Soft ntekwasa Wheatzer bụ ihe dị n'etiti Soft Coat Wheaten Terrier na Schnauzer. Nwa akwukwo a choro ime ihe uto, ndi enyi na ndi enyi na ndi ozo.
Uwe ha dị nro ma nwee ume ma nwee agba dị iche iche. Nkịta a nwere ọgụgụ isi bụ ezigbo enyi ezinụlọ.
Zute Eddie, ihe nkedo dị nro nke dị nro - Isi ihe onyonyo
Na Wheaten Terrier ụlọ nyocha , nke a makwaara dị ka Wheatador, bụ ngwakọta nke Labrador Retriever na Soft Coated Wheaten Terrier ma bụrụ nkịta dị ike ma na-ahụ n'anya.
Ọ dị mfe ịzụ na obi ụtọ ịnọnyere ndị nwe ya; nke a bụ fabulous ahụrụ n'anya maka ezinụlọ nọ n'ọrụ.
Ebe ọ bụ na ụdị nne na nna dị iche iche, ọ na-esiri ike ịkọwa kpọmkwem otu Wheatador ga-adị na ọdịdị.
Ihe a dabere na nne na nna na-achịkwa nne na nna ọ bụla. Ha na-ekwe nkwa na ha ga-abụ egwuregwu na muscular na-ewu na njikere maka ifịk ndụ.
Nwatakịrị nwanyị nwanyị Wheaten Terrier Lab mix mix - Isi ihe onyonyo
Na Soft ntekwasa Wheaten Terrier’s omume enyi na ịnụ ọkụ n'obi ime omume mee ka ha bụrụ nkịta pụrụ iche maka ndị nwe nkịta oge mbụ, ọkachasị ndị nwe ya na ezinụlọ.
Ha ga-egosi gị ịhụnanya na ịhụnanya ma na-eguzosi ike n'ihe n'ụzọ siri ike, na-eme ka gị cuddly ihe egwuregwu ụmụaka nakwa nke gị njikere nche.
Ha nwere ike ịbụ ndị isi ike, nke pụtara na ị ga-achọ obere ndidi mgbe ị na-azụ ha. Ma ọ bụrụ na a zụrụ gị site na nwata site na iji ụzọ ziri ezi, ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ ịdebe pup gị edozi nke ọma ma nye ha mmega ahụ kwa ụbọchị , ị ga-ahụ na nkịta a bụ ezigbo enyi, ị ga-echekwa otu ị si ebi ndụ na-enweghị ha na mbụ.
You nweelarị otu n'ime ụmụ aka a hụrụ n'anya? Biko kwuo okwu ma mee ka anyị mara maka ahụmịhe gị na Soft Coated Wheaten Terrier, anyị ga-achọ ịnụ n'ọnụ gị!
Y’oburu n’inwe udiri udiri udiri ahu nke yiri Soft Coated Wheaten Terrier, lelee ihe ndi n’okpuru:
Onye Terrier Irish
ụdị agba bụ nnukwu egwu
pitbull rottweiler German onye ọzụzụ atụrụ mix
chiuaua jack Russell mix ụmụ nkịta
kedu ka obere onye ọzụzụ atụrụ Ọstrelia ga -esi buru ibu
siberian husky gold retriever mix ụmụ nkịta